Kha Yee Phaw FM – Page2– Miracle Times
Category: Kha Yee Phaw FM
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် စားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်တစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်ကြရတယ်မဟုတ်လား။ အလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုရင် ဘယ်သူကတော့ တော်တဲ့ဝန်ထမ်း၊ ဘယ်သူကတော့ သိပ်မကြိုးစားတဲ့ ဝန်ထမ်းဆိုပြီး ကွဲပြားသွားကြတယ်။ တစ်ချို့တွေက ထိပ်တန်းနေရာတွေမှာ ရာထူးကြီးတွေနဲ့ အောင်မြင်သွားကြပေမယ့် တစ်ချို့တွေကတော့ သာမာန်ဘဝကနေမတက်ပဲ ရုံးကန်နေကြရတယ်လေ။ လူ့သဘာဝက ရှင်းပါတယ်။ သူများ ၁၀၀၀ ရရင် ကိုယ်လည်း ၁၀၀၀ ရချင်ကြတာချည်း။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းမရကြတာက ကြိုးစားပုံ ကြိုးစားနည်းနဲ့ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကြောင့်ပါပဲ။ ကိုယ်က ရည်မှန်းချက်ကြီးမားတယ်၊ ထက်မြက်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆီမှာရှိနေတဲ့ အမူအကျင့်ဆိုးတွေကို ပြုပြင်ပြီး အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့အတူ ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဘဝပန်းတိုင်ဆီကို ရောက်ဖို့ ဒီလမ်းညွှန်ချက် ၁၂ ချက်က ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းထုတ်ပါ အရာရာ နောက်မှာ နေတတ်သူတစ်ယောက်က ထက်မြက်တဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး။... Continue Reading →
ဒီဘက်ခေတ်မှာ စမတ်ဖုန်းတွေက သိပ်ကို အသုံးတည့်လာပါတယ်။ လူနေမှုဘဝမှာ မရှိမဖြစ်အရာတစ်ခုဖြစ်လာသလို တဖက်မှာလည်း စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ရောဂါဘယတွေကလည်း အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။ ဒီလို စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေသာမကပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်တော့ Selfie Syndrome ပေါ့။ ရောက်လေရာအရပ်မှာ ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီး Selfie ဆွဲနေပြီဆိုရင် ဒီပြဿနာကို သတိထားဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင်တော့ ဒါက Selfie Syndrome ဖြစ်နေတာဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ။ ယျေဘယျအားဖြင့် Selfie ရိုက်တာကို လှချင်ပချင်တဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ အများဆုံးပြုမူကြပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အမျိုးသားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးကြီးတွေရော မရိုက်ဖူးလားလို့တော့ မမေးပါနဲ့။ သူတို့လည်း လုပ်ကြတာပါပဲ။ အရေအတွက် အနည်းငယ်သာ နည်းပါးတာပါ။ ဒီလို နေရာတကာ Selfie... Continue Reading →
မကြာခင်မှာ နွေရောက်လာတော့မှာပါ။ အပူချိန်တွေက အခုချိန်ကတည်းက စပြီး မြင့်တက်စပြုနေပါပြီ။ ချွေးတွေ တအား ထွက်တာ၊ ခြေကုန်လက်ပမ်းကျတာ၊ နေရထိုင်ရတာ ညီးစီစီ ဖြစ်တာတွေကို ခံစားနေရတာ လူတိုင်းနီးပါးပါ။ ဒီလို ကာလမှာ ကျန်းမာနေစေဖို့ဆိုရင် ရေဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီလို ရေဓာတ် ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်တင်းတဲ့နေရာမှာလည်း ကျန်းမာရေးန့ ညီညွတ်အောင် ဖြည့်တင်းဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီတော့ နွေပူပူမှာ ကျန်းမာစွာနဲ့ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်မယ့် သောက်စရာလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ အုန်းစိမ်းရည် အုန်းစိမ်းရည်က အပူဒဏ်ကို သက်သာစေနိုင်သလို ကိုယ်တွင်းက ဓာတ်တွေကိုလည်း ညီညွှတ်မျှတအောင် ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ အသားအရေကိုလည်း နေရောင်ကြောင့် မပျက်စီးစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ကြံရည် ကြံရည်က ခန္ဓာကိုယ်ကို အပူဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့် သောက်စရာ တစ်မျိုးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ကု အားဖြည့်ပေးသလို... Continue Reading →
နွေရောက်ပြီလေ … ရိုးတံကျဲကျဲ ပင်အိုတို့ အလှချင်းလဲပြိုင် … နွေရောက်ပါပြီ။ ပင်အိုတို့ အလှချင်းပြိုင်နေတဲ့ ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးဟာ သူ့အတိုင်းချည်းတောင် လွမ်းမောဖွယ်ရာ၊ အချစ်ရနံ့တို့ထုံသင်းကြိုင်လှိုင်နေတဲ့ ရာသီဥတုမျိုးပေါ့။ ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးဟာ အမှတ်တရတွေ ပြည့်နှက်နေမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေစတင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုရင် သင်ယုံနိုင်မလား။ မယုံမရှိပါနဲ့ နွေရာသီဟာ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ စတင်ပေါ်ပေါက်ဖို့ Relationship တွေစတင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ရာသီပါ။ ဘာကြောင့်လဲလို့ သိချင်သွားပြီမဟုတ်လား … အခု ဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။ 1. Hanging out လုပ်ဖို့ သိပ်တွေးနေစရာမလိုဘူး နွေရာသီဟာ Hanging out လုပ်ဖို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ရာသီပါ။ ဒီလိုကာလမျိုးမှာ လူတွေက သိပ်ပြီး ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးမနေကြပဲ Hanging out လုပ်တတ်ကြတယ်။ ညနေနေဝင်ဆည်းဆာမှာ ဒင်နာလေးပဲစားမလား၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ရီဝေဝေလေးပဲ ပျော်ကြမလား၊... Continue Reading →
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အပေါများဆုံး အင်းဆက်တစ်မျိုးကို ပြောပါဆိုရင် ခြင်လို့ပဲ အတူတူ ဖြေဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဘာဖြေမှာလဲ ခြင် ပဲလား…. နေ့စဉ်မှာ ခြင်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရပြီဆိုရင်တော့ ခြင်ကင်းဝေးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ခြင်တွေ နဲ့ ကင်းကင်းနေနိုင်စေဖို့ နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခြင်ကင်းဝေးစေဖို့ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းလေးတွေက အသုံးတည့်မှာပါ။ ခြင်လုံဇကာအသုံးပြုပါ နေအိမ်ရဲ့ တံခါးတွေနဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေမှာ ခြင်လုံဇကာတွေတပ်ဆင်ပြီးနေအိမ်ထဲကို ခြင်တွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပါ။ ခြင်ထောင် သုံးပါ ခြင်လုံဇကာတပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ခြင်ထောင်အသုံးပြုပေးလည်းရပါတယ်။ တရားထိုင် ခြင်ထောက်ကစလို့ အဆင်ပြေမယ့် ခြင်ထောင် အမျိုးအစားကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ လေအေးပေးစက် အသုံးပြုပါ နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကနေအိမ်တံခါးတွေကို လုံအောင်ပိတ်ပြီး လေအေးပေးစက်ဖွင့်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ လေအေးပေးစက်မရှိဘူးဆိုရင် ပန်ကာဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်။ ငှက်မွေးပါ နေအိမ်မှာ ငှက်ကလေးတွေမွေးထားတာကလည်းခြင်တွေကို... Continue Reading →